Tyler navoaka avy antenatenan'ny trano, atao amin'ny fizahan-toetra! - MANAMPY Kevin & Tyler
Herintaona lasa izay, Tyler Lang i voaheloka ny telo volana ny fotoana nanompo, tranomaizina enim-bolana an-trano, enim-bolana tao amin'ny trano antenatenan'ny, ary nanara-maso ny famoahana taona, miaraka amin'ny fampodiana. ankehitriny, dia nafahana avy tamin'ny antenatenan'ny trano sy ny teny ny nanara-maso famotsorana tapitra!
Tyler dia voaheloka ambanin'ny Animal Enterprise Fampihorohoroana Act for nanafaka 2,000 mink avy amin'ny toeram-piompiana sy ny volony dipoavatra-hoso-doko "Liberation dia Fitiavana" eo amin'ny lafiny iray ny codefendant am-pamoloanao Kevin Johnson. Ny toeram-piompiana volony nakatona toy ny vokatry ny hetsika — fahavaratra taranaka ny biby tsy ho nampijaliana sy novonoina tao.
Tyler efa miandry fatratra andro izany ary faly foana mifindra eo amin'ny ny fiainany. Velom-pankasitrahana izy noho ny fanohanana rehetra izay olona nampiseho azy sy Kevin nanomboka ny fisamborana — ka misaotra anareo rehetra izay nanoratra azy, nanao fanomezana, namelatra fanentanana mikasika ny raharaha, ka nahatonga AETA fiampangana ho fotoana ny maneho firaisankina.
Mankalaza anio amin'ny Tyler, ary ihany koa ny maka fotoana fanohanana olona izay mbola migadra ary hiasa ho an'ny biby izay mbola ao cages.
← Fanambarana avy amin'ny Kevin